Eme nkqo nethe tye
UKUSILELA NOKUQHELEKA KWEBHODI YOKWENZA IBHODI （2）
ngomphathi ku 21-07-08
Okwesithathu, iphepha lemfazwe. IWarpage yahlulwe yaya: ukugoba okuthe tyaba, ukujija phezulu ngokuthe tye, ukujija ubude obude, ukugoba okuthe ngcembe ukuhla, ukugoba oku-S, ukumiliselwa kweendlela ezimbini. Iingozi ezibangelwa kukujijisana: ukusika, iphepha alinakuba yinto ezenzekelayo ...
UKUSILELA NOKUQHUBEKA KWEMIGAQO YOKWENZIWA KWEBHODI
1. Ukubambelela okungalunganga (iglu evulekileyo, iglu yokukhohlisa) Umsebenzi: emva kokubambelela kokuqala kwikhadibhodi imizuzu emi-5, phantsi kwesenzo samandla angaphandle, ngaphakathi, kumphezulu okanye kwiithayile ze-A, B okanye isandwich zahlulwe ngokupheleleyo , kwaye yonke imicu yamaphepha ihambelana, ayilalwanga, kwaye ...
Ukungaphumeleli okuqhelekileyo kunye nokuchasana kwemigca yokuvelisa ibhodi
Ulwazi olunxulumene nomzi-mveliso ngoomatshini bokupakisha ibhokisi
Iphepha ikakhulu lenziwe ngomthi, i-bamboo pulp kunye nengca enezinto ezahlukeneyo zefayibha. Ukutyeba kwephepha eliveliswe ngumatshini wokusila iphepha, okanye elakhelwe ephepheni nakwikhadibhodi. Kodwa umgca awungqini. Ngokubanzi, ubunzima besiseko bungaphantsi kwe-200 g / m okanye ngaphantsi kwe-0.1 mm ubukhulu. Ikhol ...
incence ibhokisi umatshini wokwenza / umatshini single facer
Lo matshini emacaleni iqulathe umnini esongwayo kunye necala elinye kumacala incence umatshini bokwakha. Kuqala, iphepha elingumlinganiso elifudumeleyo liyafudunyezwa, emva koko irowu yencindi isetyenziselwa ukwenza umilo ofunekayo. Okokugqibela, iglu (yokuncamathelisa isitatshi) isetyenziselwa incopho yencindi kunye ne-combi ...
Iminyaka emininzi, ngenxa yomgangatho ophezulu weemveliso zenkampani yam, abathengi abaninzi bakhethe iimveliso zethu, Phakathi kwabo ngabaxhasi abavela eTurkmenistan, Bathenga i-1800 yohlobo lwesithathu lwamakhadibhodi emveliso yekhadibhodi, Sekuyiminyaka emithathu isetyenziswa, nguMthengi feedba. ..
Yiba neqela elomeleleyo emva kokuthengisa, izixhobo zexesha elide ukulungisa ingxaki kunye nolondolozo kwilizwe liphela
[Inkcazo yesishwankathelo] I-Hebei Xinguang Carton Machinery Manufacturing Co., Ltd.kumazantsi edolophu elikomkhulu iBeijing nakumantla eJinan. Inamanzi alula kunye nokuhamba komhlaba. Lishishini lobuchwephesha elinenqanaba elininzi lokuveliswa koomatshini bebhokisi kunye nepr ...
Ukuphulukana kwamashishini eekhathoni yinto ephambili echaphazela iindleko. Ukuba ilahleko ilawulwa, inokunyusa ukusebenza kweshishini kwinqanaba elikhulu kwaye iphucule ukhuphiswano lweemveliso. Makhe sihlalutye ilahleko ezahlukeneyo kumzi-mveliso weebhokisi. Ukubeka ngokulula, i-t ...
Jonga unobangela wokuba ukuphakama kwekhadibhodi kuguquke.
Xa kufikwa kukunqongophala kwamakhadibhodi, abantu abaninzi baya kucinga ngekhadibhodi eyenziwe ngamazinki. Ngapha koko, le nto ayifani nokuguqula. Kuyacetyiswa ukuba kuphandwe kwimiba eliqela enje ngezinto ezingafunekiyo, oomatshini bethayile enye, ukubhabha, oomatshini bokuncamathisela, amabhanti okuhambisa, p ...